यौन सम्बन्धलाई स्वस्थ मान्न सकिन्छ - यौन मनोविज्ञान - साप्ताहिक
- करुणा कुँवर, मनोविद्
मैले स्वस्थ यौन सम्बन्धका बारेमा सुनेकी थिएँ, यसका बारेमा केही प्रस्ट पारिदिनुहोला । के सबै जोडीको यौन सम्बन्धलाई स्वस्थ मान्न सकिँदैन ? स्वस्थता भन्नाले कुन–कुन पक्ष समेटिन्छ ?
यौन ऊर्जा प्राकृतिक रूपमा शक्तिशाली हुन्छ । जसरी सूर्य, पानी, हावा वा हाम्रो आफ्नै हाँसोसँग अथाह शक्ति हुन्छ त्यसरी नै स्वस्थ यौन जीवनले जीवन सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो हुने हो, तय गर्छ । दम्पतीबीचको रोचक सम्बन्ध ओछ्यानमा भेटिने एउटा सुप्राप्य र सुगम सुख हो । हामी सबैले त्यसलाई सुन्दर बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । मनोविज्ञानले भन्छ, सचेत सकारात्मक अभिव्यक्तिले मनोबल, शारीरिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक सम्बन्धलाई बढावा दिन्छ । दम्पतीले आपसमा कुराकानी गर्ने, भावना साटासाट गर्ने, एक–अर्कालाई बुझ्न प्रयास गर्ने, केही काल्पनिक पनि हुँदै जाने र अन्तिम अवस्थामा चरम रमाइलोमा डुब्ने हो भने यौनको सन्तुष्टि र त्यसले शरीरलाई दिने लाभको कुनै सीमा छैन ।
बाह्य सम्बन्ध कायम गरेर दाम्पत्य जीवनभित्र सन्तुष्टिको खोजी गर्नु जुवा खेल्नु समान हो । यसमा कुन उत्तम विकल्प हो भनेर सोच्नुपर्छ र त्यसभित्र सम्भावना र सन्तुष्टिको खोजी गरिनुपर्छ । धेरैले दाम्पत्य जीवनभित्रको यौन सम्बन्धलाई राम्रो मानेर यस्तो सम्बन्धलाई रोचक र रमाइलो बनाउने गरेका छन । ओछ्यानको तनाव अर्थात् ट्रबल इन द बेड आधुनिक विश्वका कामकाजी मानिसहरूको प्रमुख समस्या बन्दै गएको छ । झगडा बढ्दै गएपछि सम्बन्ध बिग्रने र अर्को स्थायी वा अस्थायी सम्बन्ध विकास गर्नेतिर लाग्नेहरू पनि उत्तिकै हुन्छन्, तर त्यसले अझ नैराश्यता ल्याएर पुरानै अवस्थामा फर्कनेहरूसमेत छन् । त्यसैले यौन सम्बन्धलाई स्वस्थ बनाउन आफैंभित्रका कमजोरी पहिचान गर्ने र आफैंभित्रका सम्भावनाहरूको खोजी गर्नेतिर लाग्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।
यौन स्वस्थताका लागि यौनकै विषयमा कुराकानी तथा यौन मनोविज्ञानका सीपका बारेमा कुरा गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यौन सबैको अनिवार्य आवश्यकता हो र यो आवश्यकतालाई किन स्वस्थ राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि खुलेर चर्चा गर्नुपर्छ । हरेक जोडीमा यौनसम्बन्ध राख्दा अपनाइने विधिहरू फरक–फरक हुन सक्छन् । हरेक व्यक्तिको यौन इच्छा फरक–फरक हुन्छ । स्वस्थ यौन सम्बन्ध भन्नाले दुवै जोडीले यौन क्रियाकलापका क्रममा आनन्द महसुस गरेको हुनुपर्छ । कुनै एक जनाले आफूलाई यौन क्रियाकलापका लागि दबाब दिएको महसुस गर्नु हुँदैन ।
दुई जनामा एक जनाले आफूलाई इच्छा नहुँदा इच्छा नभएको कुरा व्यक्त गर्ने अधिकार दिने मात्र होइन, त्यस्तो भावनाको सम्मानसमेत गरिनुपर्छ । यौनसम्पर्कपछि एक–अर्काप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ र सम्मान गिरेको महसुस हुनु हुँदैन । यौन इच्छा तथा यौन क्रयाकलापका बारेमा खुलेर एक–अर्कासँग कुराकानी गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक हरेक यौनसम्पर्क हुनुअघि एक–अर्काको शरीर एवं भावनालाई महसुस गर्नुपर्छ ।